YuIP.org - Lee ọha gị IP na gị onwe IP Online.
YuIP.org Jiri YuIP saịtị na-achọpụta gị IP, elele emeghe ọdụ ụgbọ mmiri, na-anwale latency na otutu sava na ụwa na-enye online Ping iwu.
Gosi gị IP
elele ọdụ ụgbọ mmiri
Your IP na Internet
Your IP Obodo Network
Your IP na Internet, m na-na-ezo aka ọha gị adreesị IP, nke pụtara na adreesị IP na bụla website ị nweta ike na-ele ya. Ọ bụrụ na ị na-eji proxy nkesa ọha IP dakọtara na-ege ntị gị zighachi akwụkwọ nnọchiteanya server IP.
Your IP na LAN, a bụ otu ihe ahụ dị ka gị onwe adreesị IP. Nke a IP dị naanị maka ngwaọrụ na jikọọ na gị na mpaghara na netwọk. Ele na adreesị IP gị na LAN ohere a na saịtị na-akwado na iji Chrome nchọgharị ma ọ bụ Firefox nchọgharị n'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla pụrụ ịhụ ya.
Wegara IP kwekọrọ na ihe IP address nwere nzube mata a ngwaọrụ nweta internet saịtị site na HTTP n'akwụkwọ nnọchiteanya nkesa. Ọ bụ omume na gị zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nkesa na-ahazi na-na-egosipụta gị IP zijere. È nwere ihe ọzọ n'ọnọdụ ndị na-zijere IP na-eji na ibu echiche ziri ezi.
Your ISP, a na ubi na-agbalị ịmata ihe ụlọ ọrụ na-ahụ maka gị njikọ Ịntanetị.
Nkezi latency, M pụtara na nkezi oge gị internet zipu ma nata a obere iwu ka a website. Nke a na-eme oge ọ bụla na ọzọ mgbe ị nweta a website. Ya mere, ndị mkpumkpu oge, na kpu zipu ma nata comandos.O usoro ga-anwa ime ka latency ule na gị internet iji kacha nso AWS nkesa na ị nwere ike.